बर्मामा सैन्य क्रुरता: ४ सय बढी मारिए – Waikhari
४. कपिलवस्तुका पत्रकार नन्दराम पौडेलको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु
गृहपृष्ठ अन्तरास्ट्रिय खबर बर्मामा सैन्य क्रुरता: ४ सय बढी मारिए
बर्मामा सैन्य क्रुरता: ४ सय बढी मारिए
नपिद्व: म्यानमारमा सैन्य कूको विरोध सडकमा उर्लिएको जनसागरलाई बलपूर्वक दबाउन खोज्दा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । ४ सय भन्दा धेरै मारिएका छन् । प्रदर्शननकारीमाथिको सैन्य ज्यादती बढ्दो छ। हजारौँ मानिस हिरासतमा थुनिएका छन् ।
गत फेब्रुअरी १ मा सेनाले कू गरेपछि त्यसको विरोधमा हरेक दिन प्रदर्शन हुँदैआएको छ । तर सेनाले प्रदर्शन दबाउन व्यापक रुपमा गोली वर्षा गरेको छ ।पछिल्ला दिनहरुमा प्रदर्शनकारीहरुमाथि सेना थप आक्रामक देखिएको छ । पछिल्लो शनिबार मात्रै सेनाले ४० ठाउँमा गोली चलाएको थियो । जहाँ १ सय भन्दा धेरै मारिएका छन् । र यस घटनालाई फेब्रुअरी १ यताकै सबैभन्दा डरलाग्दो मानिएको छ ।
आइतबार भने स्कुले बालकसहित केही युवकहरुको श्रद्धाञ्जली सभामा भेला भएका मानिसहरुमाथि समेत सेनाले गोली चलायो । यद्यपि म्यानमारका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन रोकिएको छैन । सेना थप हिंस्रक बन्दैआएको छ ।
एजेन्सीहरुका अनुसार आइतबारसम्म आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या ४५९ पुगेको छ । तर अरु केही मृत्युका समाचार रेकर्ड नभएको हुनसक्ने बताइएको छ । आइतबार रातिसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४५९ पुगेको छ । आइतबार मात्रै ३६ जनाको हत्या भयो भने शनिबार एकै दिन ११४ जना प्रदर्शनकारी मारिए । र हालसम्म २,५५९ जना सैनिक हिरासतमा छन् । ३७ जनालाई जेल सजाय तोकिएको छ।
म्यानमारको सेनाको गतिविधिमाथि विश्वका विभिन्न देशले विरोध जनाइसकेका छन् । कतिपय देशमा त म्यानमारको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति ऐकवद्धता साथै सेनाको विरोध गर्दै प्रदर्शन समेत भएका छन् । नेपालसहित केही देशका नागरिक अगुवाहरुले सरकारलाई यस घटनाको विरोध गर्न माग गरिरहेका छन् ।
शनिबारको हिंसात्मक र ज्यादतीपूर्ण घटनासँगै अमेरिका, बेलायत सहित विभिन्न १२ देशका रक्षामन्त्रीहरुले म्यानमारको सैन्य दमनको विरोध गरेका छन् ।
बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले शनिवार सुरक्षा फौजहरूले ‘आतङ्कको शासन’ गरेको आरोप लगाएको छ। बेलायतसहित १२ देशका रक्षा प्रमुखहरूले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सेनाको हिंसात्मक कदमको निन्दा गरेका छन्।
‘नेपाल आइडल’का प्रस्तोता आसिफले किन मागे माफी ?
कोरोना विरुद्धको खोप हालसम्म ८८ हजार ७ जनाले लगाए
राजपाद्वारा समर्थन फिर्ता लिने संकेत
भक्तपुरमा खुकुरी प्रहार गरी साथीको हत्या
आजको मौसम : केही स्थानमा चट्याङ तथा हावाहुरीसहित वर्षा हुने